विशिष्ट आगो अलार्म सिस्टम कि सरल र जटिल peculiar प्राविधिक आवश्यक छन् र केवल स्वतः आगो अलार्म प्रणाली र आगोको प्रकोप लागि आगो नियन्त्रण संकेत पत्ता लगाउन, र पनि उत्पन्न गर्न समय सेवा भन्नाले छैन। यसलाई जस्ता वस्तुहरू समावेश गर्दछ:
• नियन्त्रण प्यानल। नियन्त्रण प्यानल।
• तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न रिमोट (आवश्यक भएमा)।
• उपकरण केन्द्र संचालक लागि डिजाइन गरिएको छ।
• आगो डिटेक्टरों र विभिन्न चेतावनी उपकरण (चेतावनी रोशनी, sirens, आदि)।
प्रणाली सत्ता नियन्त्रण र प्राप्त उपकरणहरू छन्। अलार्म सूचना, अडान-एक्लै आगो डिटेक्टरों सिर्जना जो सन्देश गठन र केन्द्र संचालक गर्न प्रसारित। साथै, अलार्म संकेत उत्पन्न जो पछि बाह्य नियन्त्रण प्रणाली (आगो बुझाने उपकरण अलर्ट आगो, वेंटिलेशन आपूर्ति र निकास, धुवाँ हटाउने) द्वारा ट्रिगर को।
नियन्त्रण प्यानल, स्मोक डिटेक्टर संग सुसज्जित गर्दै छन्, यो सजिलो आगो दमन प्रणालीमा समावेश छन् भनेर वस्तुको एक स्थानीय बिन्दु यन्त्रहरू नियन्त्रण गर्न बनाउन क्रममा प्रयोग गरिन्छ। कहिलेकाहीं तिनीहरूलाई बिना यो यस्तो प्रणाली व्यवस्थापन गर्न बस असम्भव छ। तिनीहरूले सञ्चालन कसरी आधारमा, आगो डिटेक्टरों धुवाँ, गर्मी, ionizing, प्रकाश, संयोजन, ग्याँस र धेरै अन्य प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आगो सुरक्षा प्रणाली को प्रकार:
पारंपरिक प्रणाली •। को डिटेक्टरों एक निश्चित संवेदनशीलता सीमा छ। साथै, डिटेक्टरों को एक समूह तुरुन्तै साधारण सिगनल सिस्टम plume, को डिटेक्टरों को केवल एक को actuation पछि पाश सामान्यिकृत अलार्म मा गठन गरिनेछ जो सरेका।
• लक्षित प्रणाली। तिनीहरू स्मोक डिटेक्टर स्थापित ठेगाना बारेमा सूचना उपलब्ध छन्। यो सम्भव अप जहाँ आगो डिटेक्टर स्थापित छ ठाउँमा आगोको स्रोत निर्धारण बनाउँछ।
कहिलेकाहीं यो आगो ठाउँ पत्ता लगाउन मात्र होइन, तर धेरै छोटो समय आगो अनुवादित छ मा आवश्यक छ। त्यहाँ सिस्टम को एक प्रकार छैन : बुझाने मिडिया पाउडर, पानी, ग्यास। कारण विद्युतीय उपकरण गर्न उठ्दा जो आगो, बुझाने गर्न, मुख्य रूप सिस्टम ग्याँस बुझाने लागि प्रयोग। आफ्नो अपरेटिङ सिद्धान्त कार्बन डाइअक्साइड र freon छिडकाव गरेर बन्द ठाउँ मा अक्सिजन एकाग्रता lowering आधारित छ। तर कहिले काँही यो सिर्फ पर्याप्त छैन, हामी आगो सेवा व्यवसायीक बारी छ।
तर, आगो डिटेक्टरों सधैं भन्ने आउँदै खतरा चेतावनी हुनेछ। यस सन्दर्भमा, आगो सेवा को बहुमत तपाईं यस्तो स्थापना सुझाव चेतावनी प्रणाली। कुनै पनि अवस्थामा, आगो अलार्म प्रणाली मान्छे को सुरक्षा अभिवृद्धि। तिनीहरूले अब उपभोक्ताहरु बीच यति लोकप्रिय छन् किन कि छ। तिनीहरूले शहर अपार्टमेन्ट मा, तर शहर बाहिर घरमा मात्र होइन स्थापित छन्। तपाईंले तिनीहरूलाई र कटेज पूरा गर्न सक्छन्।
विन्डो बारहरू: एक डिजाइन मा सुरक्षा र सजावट
तार को प्रकार, आफ्नो विशेषताहरु: electrics एल र एन मा संकेतन
अब्खाजिया मा सुरक्षित अचल सम्पत्ति किन्नु
सम्पर्क चिम्नी मस्यौदा: के र अवस्था कसरी उपाय गर्न
एक वेंट सास फेर्न अनुमति दिन्छ
सर्वश्रेष्ठ भोजनालय, सेन्ट पीटर्सबर्ग। रेस्टुरेन्ट "मास्को", सेन्ट पीटर्सबर्ग: समीक्षा र फोटो
सुझाव व्यवसायीक: कसरी बिरालोहरु को नस्ल निर्धारण
इस्पात संरचना वेल्डिंग।
सबै भन्दा राम्रो मिठाई बनेको केक, - "हंस पोखरी"
चाँदी किन दिइएन? धेरै यस कथनसँग सहमत छैन
को ओठ मा दुखेको कहाँ गरे? यसलाई कसरी व्यवहार गर्ने?